Faransiiska iyo Britian oo ladagalamaya Argagaxisada – Radio Daljir
Janaayo 19, 2018 12:15 g 0
Ciidamada Faransa iyo kuwa Britian ayaa Khamiistii Sameeyey Dhoolotuska Ciidamada Xeebaha ee Faransiiska ayna ka qeyb qaateen Saddex kamid ah Diyaaradaha Qumaatiga u kaco ee Helicopter-ka, oo ay leedahay Dowladda Ingiriiska.
Dowladaha Faranskiiska iyo Ingiriiska ayaa ku heshiiyey iskaashiga ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada, waxayna wadaagayaan qorshooyinka sida Diyaaradaha Casriga ah ee Ciidamada Qaada ama Sahaayda u geeya.
War kasoo Baxay Haweeneyda Ra’iisul Wasaaraha ka ah Britian Theresa May ayaa sheegtay in Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macaron ay iska kaashanayaan la dagaalanka Argagixisada.
Ciidamada Faransa ayaa lagu qaadayaa Diyaaradaha Casriga ah ee England, taa ayee u arkaan labada dowladood in ay fududeyn karto Wada shaqeynta labada Dowladood.
Dowladahaan ayaa kaalmo fir-fircoon ku leh Taageerista Ciidamada Midowga Yurub, Qaramada Midoobe iyo Kuwa Midowga Afrika ee Nabad Ilaalinta u jooga Soomaaliya.
Kaliya Ujeedka Ciidankaan iskaashigooda ayee ku sheegeen in ay tahay la dagaalanka Argagixisada, mana sheegin Mudda uu ku eg yahay iyo sida ay labada Dowladood u kala qeyb sanayaan Hogaanka.
Waxaa la aaminsan yahay in heshiiska Xoogiisa uu dhici doono Kolka ay London ku kulmaan Madaxweynaha Faransiiska iyo Ra’iisul Wasaaraha Ingiriiska oo ay ka wada hadlaan arrimo ay kamid yihiin Iskaashiga Ciidan.
Xildhibaano katirsan Barlamaanka Somaaliya oo gaaray Balad Weyne